Ikozvino hazvisi pamutemo kusvibisa mireza yeEU neNATO muGeorgia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Georgia Kuputsa Nhau » Ikozvino hazvisi pamutemo kusvibisa mireza yeEU neNATO muGeorgia
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • tsika nemagariro • Georgia Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Hazvisi pamutemo kusvibisa mireza yeEU neNATO muGeorgia izvozvi
Zvikamu makumi masere kubva muzana zvevagari veGeorgia vanotsigira kubatanidzwa kweEurope; kune kuremekedzwa kwakanyanya kweEU munyika.
Hafu yegore mushure mekurudyi veGeorgia radicals uye nhengo dzemapoka eruvengo dzakaputsira pasi mureza weEuropean Union panguva rally inopikisa kodzero dzengochani muTbilisi, vamiriri vemitemo vekuGeorgia vakaunza mutemo mutsva unoita kuti zvive zvisiri pamutemo kusvibisa mireza ye European Union (EU), NATO, nenyika dzenhengo dzavo.
Muzhizha ra2021, kuratidzira kwakaitwa muTbilisi kupokana neguta regore negore Gay Pride parade, panguva iyo vanhu vane masimba masimba vakarwisa vatori venhau nevaratidziri. Vakaputsawo uye vakapisa aritari European Union mureza wakanga wakarembera kunze kwechivako cheparamende. Chiitiko ichi, chinodaidzwa kuti March for Dignity, chakaona mutori wenhau wemhomho Alexander Lashkarava, uye zvakakonzera kutsamwa sezvo zviuru zvakapinda mumigwagwa zvichipomera hurumende mhosva yekukurudzira mapoka eruvengo.
Mutemo mutsva unoitawo kusvibiswa kwezviratidzo zvakabatana nemasangano, pamwe nedzimwe nyika dzese dzine Georgia ane hukama hwezvematongerwo enyika, imhosva iyo vapari vemhosva vaizobhadhariswa 1,000 323 Georgian lari ($XNUMX).
“Faindi dzakadai dzakajairika munyika zhinji dzeEurope. Isu tinofunga shanduko idzi dzichava nhanho yekudzivirira kurwisa chiitiko chisina kunaka chakaitika muna Chikunguru. Tinotenda kuti iri idanho rinofambira mberi,” akadaro Nikoloz Samkharadze, mumwe wevanyori vebhiri iri.
Pamusoro pekubhadhariswa faindi, mupari wemhosva anodzokorora anogona kutarisana nenguva yekuvharirwa nekusvibisa mireza nezviratidzo.
Georgia haisi nhengo yeNATO kana iyo EU zvakadaro, asi yakaratidza zvishuvo zvakasimba zvekubatanidzwa nemasangano ese ari maviri.
Zvikamu makumi masere kubva muzana zvevagari veGeorgia vanotsigira kubatanidzwa kweEurope; kune rukudzo rwakanyanya kuEU munyika," Kakha Gogolashvili, director weGeorgia's pro-EU Rondeli Foundation think tank, akadaro.
"Hatifanire kubvumira mapoka ane hutsinye kuita hutsinye hwakadai vachipesana nezviratidzo zveEU neNATO. Zvakakosha kuti paramende ipasise mutemo mutsva uyu nerutsigiro rwemapato akawanda.”